Raharaha Uyghur : Mitsipalotra ao Afghanistan ny tena atahoran’i Shina indrindra · Global Voices teny Malagasy
Mety hipatitaka ny fifankatiavan'i Shina sy ny Taliban
Voadika ny 29 Oktobra 2021 3:54 GMT
Tanihay ivelan'i Kashgar, Fanorenana lehibe indrindra ao Xinjiang manakaiky ny sisintany Shina-Afghanistan. Saripikan'i Marc van der Chijs (CC BY-ND 2.0).
Koa satria nanala ireo milisy avy amin'ny foko Uyghur tamin'ny sisintany mampifanolotra an'i Afghanistan amin'i Shina ny Taliban, dia milaza ny mpandinika fa mety nisy ny famelomana indray ny politikam-pandrindrana eo amin'ny mpitarika vaovao ao Kabul sy ny Antoko Komonista ao Beijing.
Araka ny tatitry ny Firenena Mikambana, ahitana milisy Uyghur 500 ao amin'ny Taliban. Raha marina izany, dia midika fa manana torohay mivantana momba ny voina mahazo ny Uyghur ny Taliban.
Navoakan'ny tatibaovao fa matahotra ny ho averina any Shina ireo Uyghurs miaina ao Afghanistan, anatin'izany ny miaramila. Loharanom-baovaon'ny New York Times iray nilaza fa “tena manahy sy mitebiteby fatratra” ny Uyghurs ao Afghanistan.
Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny VOA, nilaza ny Uyghur mpikatroka Abdugheni Sabit fa mila mandanjalanja ny feony ofisialy ny Taliban.
Raha miteny mafy hiaro ny miozolomana Uyghur ao Shina ny Taliban, dia mety hampitombo ny laza tsarany izany [amin'ny ankapobeny]. Saingy ao anatin'izany ihany dia matahotra ny tsy hahazo fanohanana avy amin'i Shina ny vondrona.
Tany amin'ny fiandohan'ny volana septambra tany, nanandratra ny feony ho fanohanana ny Uyghur ny Taliban, hetsika izay mety hanakorontana ny fifandraisana diplaomatika eo amin'ny mpitondra vaovao ao Afghanistan sy i Shina, izay noezahana hihatsara tao anatin'ny taona maro mba ifehezana ny ilany andrefana amin'ny faritra Xinjiang, izay onenan'ny ankamaroan'ny Uyghurs.
Eny, andro vitsy mialoha, nilaza ny mpitondratenin'ny Taliban, Zabihullah Mujahid, fa amin'ny voalohany ny governemanta hiankina amin'ny famatsiam-bola avy any Shina. Tamin'ny firesahana tamin'ny gazety Italiana La Repubblica no niteny i Mujahid fa handray anjara amin'ny “fameloma-maso indray ny tetikasa tranainy Lalan'ny Lasoà (lamba landy)” ny government Taliban, amin'ny alalan'ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Shina.
Manana “toeram-pitrandrahana varahina, izay azo sokafana sy trandrahana amin'ny fomba maoderina indray, noho ny shinoa” i Afghanistan.
Namehy i Mujahid hoe “i Shina no lakilentsika mankany amin'ny tsenan'izao tontolo izao”.
Andro vitsy taty aoriana, tamin'ny heverina ho kihon-dalana, Suheyil Shaheed, mpitondratenin'ny Taliban iray hafa, no niteny tamin'ny fantsom-pahitalavitra Japoney TBS TV fa mijoro eo amin'ny rariny ny hetsika misy azy.
Manantena aho rehefa mitsidika an'i Shina izahay, hiresaka […] momba ny fiarovana sy ny hitsiny [ho an'ny] Uyghurs izahay. Olom-pirenena shinoa ny Uyghurs, ary tokony hitovy zo ny olom-pirenena rehetra, ka tokony ho izany ny Uyghurs.
Izay no fotoana voalohany nilazan'ny Taliban ny miozolomana Uyghur ampahibemaso sy nanehoany fironana ho azy ireo.
Hita ho nitandrina ny mpitondratenin'ny Taliban, na izany aza, nanampy, “Manantena indrindra izahay hanohy hiara-miasa ara-toekarena amin'i Shina, izay tsy isalasalana fa hahasoa an'i Shina ihany koa.”
Teboka diplaomatika iray mahatafintohina
Ho an'i Shina, vay-an-dohan-draharaha i Xinjiang, tsy amin'ny harena voajanahary ao aminy ihany, fa eo amin'ny tombontsoa ara-tetipanoron'ny Antoko Komonista ihany koa. Tian'i Shina kokoa ny mampifamatotra izay fanampiana na fampiasam-bola nokinasa amin'ny fankatoavana ankapobeny amin'ny raharaha Uyghur.
Ny zava-nitranga, nandritra ny fihaonan'ny manampahefana Taliban sy Shinoa tany amin'ny tanànan'i Tianjin, nangatahan'i Shina ny Taliban hanisy elanelana mazava amin'ny fiatahana amin'ny East Turkistan Islamic Movement (ETIM na Hetsika Islamika Tiorkistan Atsinanana), vondrona mpisintaka mikendry ny hanangana fanjakana mahaleotena ho an'ny Uyghurs.
Tian'i Shina ny hampangina ity raharaha (lohahevitra) ity, raha farafahakeliny Uyghurs iray tapitrisa no voahazona amin'ny tobim-panangonana miisa 380 ao amin'ny faritra Xinjiang.
Nilaza i Rabiye Kadeer mpitarika ny Uyghur fa hiharihary afaka taona vitsy ny fahavoazana amin'ny fandripahana Uyghur.
Na dia vahoaka telo tapitrisa aza no migadra amin'ny hotely kintana dimy, fa tsy amin'ny toby na fonja, dia hitarika faharariana izany, ary raha maharitra efa-taona izany dia hitarika fahafatesana.
Nandrisika ny Taliban i Shina hihataka mazava amin'ny ETIM ary niangaviany ny governemantan'i Etazonia hampiditra indray io vondrona io ho ao anaty lisitra maintin'ny fikambanana mpampihorohoro. Ny tsapa, ny atahoran'i Shina amin'i Afghanistan dia tsy ny tsy fialan'i Afghanistan amin'ny ETIM fa ny tsy fialan'ny Taliban amin'ny [fanohanana] ny Uyghur.
Amin'ny hetsika fankahalana fivavahana aza moa dia antsoin'i Shina ankarihary ho aretin-tsaina ny Islam.
‘Tratran'ny hiringiriny ara-pivavahana sy ny fotokevi-pampihorohoroana mahery setra fa tsy mandray ‘fitaizana (fanarenana) indray’ dia mitovy amin'ny tratran'ny aretina fa tsy mitady fanafody, na lasa miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina fa tsy manaiky fitsaboana.
Eny, ireo firenena miozolomana te-ho tsara fifandraisana amin'i Shina dia mila na (manao ho tsinontsinona) ny raharaha Uyghur na manaraka ankitsirano ny fomba fitenin'i Beijing.
Avy amin'izay toe-javatra izay ny Taliban no hiatrika fitsapam-pinoana amin'ny raharaha Uyghur: na hiaraka amin'ny voatsindrihazolena na azo antoka fa hahazo fanohanana ara-bola.
Naoty: noho ny antony fiarovana dia nampiasa solon'anarana ny mpanoratra.